Zvayaiva mukati masvingo rudzi ruduku zvenyika, Guta Vhatikeni, St kwaPetro Basilica Hapana mubvunzo yebudiriro wacho mukuru zvakapembererwa pamusoro mapurani uye nounyanzvi. zvino mumwe zvikuru udo mufanidzo 10 miriyoni Vashanyi pagore, ichi hunoshamisa mamiriro Hakutarisi St Petro Square uye Anozvirumbidza ane opulent wemishonga enhoroondo unyanzvi, column uye iconic rising wezvidimbu mudungwe-mazano Michelangelo (paunogona achikwira pamusoro, Unofanira angatsunga kutora 491 matanho munzira!).
Zvinowanikwa muguta Turkey raMwari transcontinental, Istanbul, ari Sultan Ahmed Mosque unonyanyozivikanwa kunzi The Blue Mosque nokuti ayo akasiyana mutema mukati. Yakavakwa hweOttoman Sultan Ahmed I pakati 1609 uye 1616, ichi mamiriro chaizvo anoita se vaviri guru vashanyire kukwezvwa uye chinoshingaira nzvimbo yokunamatira, kureva chechi yapera vasiri vanamati panguva minyengetero shanu daily – kunyengetera nguva kunogona kuva wamaka pano usati shanyira.
Pane kuzviomesera yemapfekero munhu kuti vashanyi zvose vanofanira kuomerera vasati vapinda chechi. Chekutanga, shangu anofanira kubviswa woiswa zvakajeka mupurasitiki bhegi inopiwa iri chechi usingabhadhari – iwe zvino tiine mukana kusiya shangu venyu cubby buri kana kutakura bhegi newe. Kana totaura pezvokupfeka, Varume vanofanira vasarudze yokusazvibata mbatya uye nechokwadi makumbo avo zvakafukidzirwa, kudzivisa zvinhu zvakadai vanamajasi uye zvikabudura. Vakadzi vanofanirawo kupfeka anongoremberera kukunakira zvipfeko, apo nechokwadi maoko avo, makumbo, uye bvudzi zvakafukidzirwa dzimwe pfungwa dzose. Izvi zvinoreva kuti vanhukadzi vanotarisirwa kupfeka headscarf apo mukati uye, sezvo izvi zvingava pfungwa itsva dzakawanda vaisava Muslim Vashanyi Western, isu dzinorumbidza kudzidza kuti zvakarurama kupfeka zvipfeko ichi mwero kuchikosha usati rwendo.
Gamuchira kuchechi uye vashanyi kubva muzana ramakore rechi19, The Sagrada mhuri Basilica iwe Anopiwa 4.5 miriyoni Vashanyi ose gore uye ikozvino unoshanda munhu ticketed kupinda gadziriro somugumisiro – izvi zvinowanikwa kutenga paIndaneti kusvikira mwedzi miviri isati musi wako kushanya. matikiti izvi kushanda ngadzirambe hwomukova nguva senzira yokuderedza yokuwandisa, zvisinei, kamwe uri mukati Uri wakasununguka kupedza chero mungadai sezvo kufanana vachiyemura runoshamisa mukati. Tinokurudzira kubvumira kanenge 2 maawa kuti zvakanaka kutora iyi mapurani vanonetseka. Vashanyi vachitsvaka kupinda basa chechi, gobvu yakaitirwa 9am Sunday ose uye 8pm Mugovera ose, inogara 1 awa uye chichiitirwa mumitauro inoverengeka.